Just iska ilaawaan telefoonka Android jir ah mid cusub, sida Samsung Note 4, oo aad rabto inaad dajiyaan oo dhan xiriirada ka CSV ah soo gudbin leh? Eeg siyaalo wax dhoofin xiriirada Android inay file CSV ah, si aad si fudud u daabacan kartaa ama geliyaan si aad xisaab Kitaabka Cinwaanka Google, Outlook, Windows? Waa fud. In this article, waxaan jeclaan lahaa in uu ku tuso sida loo sameeyo waa talaabo talaabo ah.
Qaybta 1aad: Sida loo dhoofiyo Android Xiriirada in CSV
Qeybta 2: Sida loo soo dejinta CSV Xiriirada in ay Android
Qaybta 1. Sida loo dhoofiyo Xiriirada Android inay CSV
Si aad u dhoofiyaan xiriirada Android sida file CSV ah, waxaan jeclaan lahaa in aad ku talin sahlan in la isticmaalo freeware - Wondershare MobileGo. Waa qalabeed ah oo si gaar ah loogu super mobile, oo waxay ka caawisaa si loo fududeeyo noloshaada Android. Sidaa daraadeed, waxaad si fudud oo effortlessly badbaadin karo dhammaan ama xiriir la doortay sida file CSV ah.
Qaybta hoose wuxuu muujinayaa sida ay u gudbiyaan xiriirada ka Android inay file CSV ah. Raac qaybtan oo isku day inaad kaligaa.
Tallaabada 1. Run Wondershare MobileGo iyo Connect Your Android Phone in Computer
Marka ugu horeysa, dejisan iyo gashato this on your computer Windows. Waxay u ordaan oo furaysto cable USB in computer ah oo wuxuu galay in telefoonka aad Android ku xiran. daraystaan ​​in ay ku xiran? Riix halkan >>
Tag geeska kore ee midigta iyo guji inay la soo wareegto ama saxiixdo oo aad Wondershare Passport. Sida aad ogtahay, waxaad saxiixi kartaa in la xisaabtaada Facebook, Twitter, Google ama YouTube.
Tallaabada 2. Save Android Xiriirada sida File CSV ah
In galeeysid bidix, guji Xiriirada . Daaqadda maamulka xiriir ah, doortaan category xiriir ah, sida Phone. Markaas, doortaan xiriirada aad rabto in aad dhoofin oo guji dhoofinta . In ay menu hoos-hoos, dooran dhoofinta xiriir la doortay si ay u computer ama dhoofinta dhammaan dadka ay khuseyso in computer.
Markaasay aad u hesho 6 doorashooyin: in file vCard, si file CSV , in Outlook Express , in Outlook 2003/2007/2010/2013 , in Windows Cinwaanka Book , in Windows Live Mail . Dooro si file CSV . In file suuqa kala pop-up browser, dooro meel ay ku badbaadin file CSV oo guji Save .
Hadda, aad si guul leh loo badbaadiyo xiriirada Android sida file CSV ah. War sow ma aha fudud?
Qaybta 2. Sida loo soo dejinta CSV Xiriirada in ay Android
Waa maya brainer in ay dajiyaan CSV in Android. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa xisaab Gmail. Just geliyaan file CSV ah in aad xisaabta Gmail, ka dibna xisaabta ee telefoonka aad Android u hagaagsan. Sidee u fududahay waa. Hoos waxaa ku hage tallaabo-tallaabo. Raac waxa.
Tallaabada 1. Open Brower on your computer iyo dhulka Gmail. Saxiix in aad xisaabta Gmail.
Tallaabada 2. Tag column bidix oo guji Gmail . In ay menu hoos-hoos, dooran Xiriirada .
Tallaabada 3. Riix More ... In ay menu hoos-hoos, dooran Import ...
Tallaabada 4. Tani waxay kor u soo Bixiyaa wax wada hadal ah. Riix Dooro File . In file suuqa kala pop-up browser, falgali meeshii file CSV la badbaadiyey. Waxaa Dooro iyo guji Open > Import inay geliyaan file CSV ah in aad xisaabta Gmail.
Tallaabada 5. Hadda, dhammaan dadka ay khuseyso in file CSV waxaa uploaded in aad xisaabta Gmail.
Tallaabada 6. Sign in aad xisaabta Google telefoonka aad Android. Markaas, waxaad tagtaa Settings > Accounts & hagaagsan . Raadi xisaabtaada Google oo ka jaftaa. Markaas, sax nidaameed Xiriirada > nidaameed hadda . Marka waa dhameystiran, dhammaan xiriirada CSV noqon doonaa telefoonka aad Android.
Tallaabada 7. Waxba ma ahan haddii aadan lahayn xisaab google ah telefoonka aad Android. Waxaad weli dajiyaan karaa xiriirada si Android ka file CSV ah.
Just gudub talaabada 6 guji More ... > dhoofinta ... Dooro kooxda halkaas oo ay dhammaan xiriirrada CSV waxaa la badbaadiyey. Markaas, doortaan si loo badbaadiyo sida qaab vCard . Riix dhoofinta soo bixi file vCard ku on your computer.
Tallaabada 8. Buur telefoonka Android sida drive dibadda adag. Si guul leh la ogaado Marka, si ay u tagaan Computer iyo telefoonka aad ka heli Android.
Tallaabada 9. fur telefoonka aad Android. Dhammaan fayl iyo files badbaadiyey kaarka SD ah waxaa lagu soo bandhigaa idinka soo hor jeedda. Just nuqul oo file vCard ku paste halkan.
Tallaabada 10. Adiga Android phone, tuubada Xiriirada app. Tubada Xiriirada category iyo riix batoonka dalwaddii tagay si badhanka ugu muhiimsan si ay u muujiyaan menu. Dooro Import / Dhoofinta > ka kaydinta USB Import > Import ka card SD (Waxaa loola jeedaa kaadhka SD dibadda.)
Tallaabada 11. hadal A baxa, waydiinaya inaad badbaadin xiriirada si Phone ama xisaab-aad. Dooro mid ka mid ah iyo telefoonka aad Android uu bilaabo inuu raadiyo file vCard ah. Marka lagu sameeyey, dooran file Import vCard > OK . Markaas, dhammaan dadka ay khuseyso in file vCard uu noqon doono dejinta inay telefoonka aad Android.
> Resource > Android > Si fudud Dhoofinta / Import CSV Xiriirada ka iyo in ay Android Phones